Kuuriyada Kuunfureed oo digniin u dirtay Kuuriyada Waqooyi - BBC News Somali
Kuuriyada Kuunfureed oo digniin u dirtay Kuuriyada Waqooyi
Image caption Moon oo la dhaarinayo
Madaxweynaha cusub ee Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay in ay jirto rajo aad u wanaagsan oo ku aadan colaadda kala dhaxeysa Kuuriyada Waqooyi. Isagoo booqanayey xarunta wasaaradda gaashaandhiga ayaa Mr Moon wuxuu u diray fariin culus xukuumadda Pyongyang taas oo ah in gardarro kasta oo military laga bixin doono jawaab.
Habka dawaldiisa ku socoto waa laba wadiiqo oo kala ah in muujiyo isdifaaca milatari ee ka dhan ka Kuuriyada Waqooyi in uu ahaada mid aan cabsi soo wajihin iyo in isbahaysiga Mareykanka uu ahaa mid sidiisa u jria, waxaa kale oo uu leeyahay xiriir lala sameeyo Pyongyang in ay tahay in dib loo aasaaso, kaasi oo si buuxda u go'ay sanad ka hor.
Moon oo rajaynaya in uu booqdo Kuuriyada Waqooyi
Maxaynu ka naqaanaa gantaalkan cusub ee ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi?
Moon Jae-in oo ku guuleystay doorashada Kuuriyada Koonfureed